भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुँदा नेपालमा किन महँगो ? ::Nepali TV
You are here : Home News भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुँदा नेपालमा किन महँगो ?
काठमाडौँ: नेपालको एक मात्र पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातक भारतमा एकसाता अघिदेखि तेलको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । भारतमा बितेको साताको पाँच दिनमा मात्रै पेट्रोलको मूल्यमा ३४ पैसा घट्यो । यही आइताबार भारतीय आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य १० पैसा घटायो ।